ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ် by Khun San Law | Free Listening on SoundCloud
ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ် by Khun San Law
published on 2016-01-13T13:39:53Z
Comment by Ko Htwe
Users who like ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ်
Users who reposted ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ်
Playlists containing ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ်
More tracks like ဒီသီချင်း​လေးကြိုက်​လို့ပါဗျာ။ မူးရင်​ ​အော်​ဆိုချင်​လို့ ??? ။ စာသားက မရပြန်​ဘူး​လေ ။ စာသား​လေးများရှိရင်​ မစကြပါအုံး အရပ်​ကတို့​ရေ ...။ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြပါအုံး ကြိုက်​ကိုကြိုက်​သွားရမယ်​ အာမခံတယ်​။ သီချင်းအမည်​က သနားခါး​လေးနဲ့​မောင့်​ရဲ့ချစ်​သူ ။ ဘယ်